Nezvedu - Xiamen Globe Chokwadi (GT) Maindasitiri Co, Ltd.
Kugadzika kubvira 1998, Xiamen pasi rose chokwadi (GT) Maindasitiri anoshanda muindasitiri yeBulldozer & Excavator zvikamu zvakasara. Ine anopfuura 35,000 mativi mativi efekitori & nzvimbo yekuchengetera nzvimbo muQANZHOU, CHINA. Yedu fekitori inogadzira undercarriage zvikamu zvakaita track track roller, inotakura roller, track ketani, kumberi idler, sprocket, track adjuster nezvimwe.
Zvimwe zvikamu, sere track track bolt / nati, track bhutsu, track pini track bushing, bhakiti, bhaini pini, bhachi bhandi, mazino emugomo, bhachi adapter, breaker nyundo, chieri, track muchina, rabara track, rubha pad, injini zvikamu, blade, yekucheka kumucheto, mini excavator zvikamu nezvimwe.
2003 --- XMGT Ind. Vane vane masimba okuitisa uye kutumira kunze kwenyika.
2003 --- GT mhando, dzakagadzirwa.
2004 --- Isu takava iwo machina akasiya zvikamu nyanzvi muChina.
2007 --- 1120 machini akasiya zvikamu mafekitori akabatana nesu.
2008-- Tine akasarudzika ari ega muPakistan, Iran, nezvimwe
2009 --- Takatanga kushandira pamwe neInternational mukurumbira brand BERCO.
2010 --- Takatanga kudyidzana neInternational brand ITM
2011 --- Yedu yekutengesa huwandu ndeye USD5,600,000.0
2012 --- Isu tiri Mugadziri weMSC brand under underchannel zvikamu
2017 --- GT boka rinova vanhu makumi maviri.
2020 --- GT yekutengesa chinangwa ichave USD 10 miriyoni
2022 --- GT yekutengesa chinangwa ichave USD 12 miriyoni, gadza 3 kambani inotsigira.
Imwe Yamira Kutenga kwezvinhu zvepasi pekutakura.
Tine makore makumi maviri ruzivo rwekutumira kune dzinopfuura nyika gumi nematatu nematunhu.Mazhinji emhando 200+, 5000 + kutaurwa kwemhando dzakasiyana dzemishini michina.
2.OEM Zvigadzirwa zveBrand zvakasiyana
Ipa mamwe eOEM undercarriage zvikamu & GET zvikamu kune inozivikanwa brand, yakadai seITR uye ITM nezvimwe.
Dhirowa yezvinhu zvese zvinogona kupihwa kutarisa mushure mekurongeka zvakasimbiswa, kuitira kudzivirira dambudziko kuti izvo zvinhu hazvizoshande nekuda kwehukuru uye nemamwe matambudziko.
4.Factory yekuongorora sevhisi
Factory yekuongorora service inogona kupihwa usati waisa mirairo.
Zvivakwa zvekutarisa sevhisi zvinogona kupihwa usati waendeswa (mapikicha, chiyero data, nezvimwewo), uye zvakare ongororo mushumo.
7.Delivery nguva yekuvimbisa uye kuwanikwa kwemasheya
Nguva yekutumira inogona kuvimbiswa zvinoenderana nesungano zvibvumirano. Zvimwe zvigadzirwa zvakajairika zviri mudura uye zvinogona kuendeswa mukati memazuva manomwe.
Nguva yewarandi inogona kupihwa inopesana neyekubhadhara zuva rekutungamira, zvimwe zvigadzirwa zvine mwedzi gumi nemaviri asi zvimwe zvine mwedzi mitanhatu.
Mari yekubhadhara inoshanduka.
Kubhadhara kwakazara, kana kuti 30% kugadzirira, uye mubhadharo webhadharo usati waendeswa.
Kudhindisa Wire (T / T), tsamba yechikwereti (L / C), Western Union, Cash, nezvimwe.
Tipeiwo mazwi akasiyana ekutengeserana evatengi, ayo anosanganisira:
EXW (Ex Work), CIF (Mutengo, Inishuwarenzi uye Freight),
FOB (Yakasununguka Pabhodhi), DDU (Yakanunurwa Duty Isina Kubhadharwa),.
DDP (Nunura Duty Paid), CFR CNF C&F (Mutengo uye Mutoro)
11.Outward chitarisiko zvigadzirwa
Tipe mhando dzakasiyana dzemavara (Dema, Yero, Chinangwa, Grey) uye rakasiyana chitarisiko, chakacheneruka kana chefu glossy.
Vatengi 'kambani logo inogona kuve yakaiswa chiratidzo kana odhita inowana minimun mhando
Kurongedza kwakasiyana kunowanikwa, kunge mapuranga emadziro, blister, mabhokisi emapuranga, matairi esimbi, mafirita esimbi, etc.
Kuisa zvakadzama nehuremu, huwandu, ruvara, nezvimwe.
Wedzera zvese mudziyo kana huwandu huzhinji hwekutakura FCL & LCL sevhisi yevatengi.
16.Extra Chigadzirwa Kutenga Services
Ipa rekutenga sevhisi yechinhu chiri nyore kuitira tsika yakajeka, yakadai seyekuchera mabulldozer mhando, magnets uye zvichingodaro.
Chibvumirano cheA Agency chinogona kusainwa nechimwe chigadzirwa, mamwe matunhu, kana zvigadzirwa zvedu.
18.Payment On Bevenue yevamwe
Gamuchira iyo kubhadharwa mumutemo kubva kune rumwe rutivi vanosanganisira vamiririri, vanobatika kana shamwari dzemutengi. Uye isu tinogona zvakare kubatsira kuronga kubhadhara kune vamwe vatengesi pachinzvimbo chemutengi.
Dzimwe nyika dzinopinda mukutengeserana dzinogona kupihwa, sekutengesa zvinhu kubva kuHonduras kuenda kuUnited States, uye kubva kuSingapore kuenda kunyika dzeEurope.